Home > GEMS GISE and STEM > GGS Somali
Sida barnaamijyadayada xagaaga ee GEMS-GISE, Kuliyadda Dugsiga kadib ee GEMS-GISE STEM wuxuu diiradda saaraa heerarka tacliimeed iyo sahaminta sayniska iyo xisaabta iyadoo loo marayo khibrado waxbarasho oo ku saleysan mashruucyo iyo dhibaato. Fasallada waxay dhexgalaan fikradaha injineernimada iyo farsamada. Koorsooyinkan STEM ee aadka u mashquulsan waxaa lagu heli doonaa iyada oo loo marayo barashada masaafada. Tababarayaasha GEMS-GISE waxay koorsooyinka si toos ah ugu barayaan online iyagoo adeegsanaya mashruuc gacmeed ku saleysan sahaminta Sayniska, Teknolojiyadda, Injineerinka iyo Xisaabta! Dhammaan alaabooyinka koorsada iyo qalabka la bixiyay. Ardaydu waxay iska diiwaan gelin karaan hal ama laba koorso Dayrta 2020. Fadlan kala-doorashooyinkaaga kala saraysii wixii intaa dheer ku qor codsiga sida aad u kala jeceshahay.
DIIRADA GEMS (Gabdhaha injineernimada, xisaabta, iyo sayniska)
GISE (Ragga sayniska iyo injineernimada)
STEM (Sayniska,Teknolojiyadda, Ijineerinka yo Xisaabta)
KOORSADA CULTURAL IMMERSION (Gr K-5)
MAGACA HORE EE ARDAYGA
MAGACA DAMBE EE ARDAYGA
AQOONSIGA ARDAYGA ID# (HADAAD GARANEYSO)
CIWAANKA DEEGAANKA GURIGA
QOLKA APT #
NAMBARKA XAAFADA (ZIP CODE)
ARDAYGA WELIGE MA KA QAYBQAATAY GEMS / GISE / STEM BARNAAMIJKA ISKUULKA KA DIB?M?
HADDII AY SII JIRTO, XAGEE & GOORMA?
ARDAYGA MA WAQTIGAAN HELAA TAAGEERADA TACLIINTA SIDA AS WAXBARASHADA GAARKA AH, TITLE 1, ELL (LUQADDA GURIGA), MISE BARAHA HORUMARKA?
HADDII AY HAA TAHAY, FADLAN QOR LIISKA MACLUUMAADKA TAAGEERADA
RUUXA MASUULKA 1 MAGACA HORE
RUUXA MASUULKA 1 MAGACA DANBE
MASUULKA 1 TALEEFAN NUMBARKA
MASUULKA 1 EMAIL
RUUXA MASUULKA 2 MAGACA HORE
RUUXA MASUULKA 2 MAGACA DANBE
MASUULKA 2 TALEEFAN NUMBARKA
MASUULKA 2 EMAIL
KALA SARAYSII KOORSOOYINKA SOO SOCDA K-5, EE 1 U QAADO DOORASHADAADA UGU HORAYSA (eeg 6-8 xulashooyinka hoose haddii ardaygu dhigto dugsiga dhexe):
Abuur, Dhibaato xalli, Wax ka baro BADAN badhano, Robotyo, Diir, Balanbaalis IYO Dhisida Xirfadaha Xisaabta! Khibrad gacan-qabasho, la kulan macallimiinta iyo asxaabta! (Mawduuca diirada: Xisaabta iyo Sayniska)
Barashada Xisaabta Ku salaysan Mashruuca (Gr K-1)
Fasalkani wuxuu baran doonaa luqadda aasaasiga ah ee Hmong, akhriska, qorista, ku hadalka, iyo dhaqanka soo jireenka ah. Ardaydu waxay ka qaybqaadan doonaan farshaxanka muuqaalka-biliteracy ee leh mashaariicda gundhigga STEM
K-2 Hmong Culture-STEM Course (Gr K-2)
Baro koodheynta iyo injineernimada si aad u abuurto sheekooyin is-dhexgal ah, naqshadeynta nashaadaadyo iyo ciyaaro, sameyso apps-ka, iyo sameyso mashaariic cajaa'ib leh. Ardaydu waxay sahamiyaan habka injineernimada iyagoo qaabeynaya bots-kooda gaarka loo leeyahay ee Hexbug sumo leh lifaaqyo. (Mawduuca diirada: Isku dhafan STEM)
Koodh-injineernimada (Gr K-3)
Koorsadaan Ardaydu waxay baaritaan ku sameeynayaan iyagoo gacmaha la galaya howlaha farsamada Mashiinnada Fudud iyo Farsamooyinka kale. Ardayda wax ku baraneysa: Mashiinnada fudud waxay si fudud u qabanayaan shaqada. Mashiinnada fudud waxay leeyihiin qaybo yar ama aan lahayn dhaqdhaqaaq. Mashiinnada fudud iyo farsamooyinku waxay beddelaan jihada xoogga ama xaddiga xoogga loo baahan yahay si wax loogu qabto.
Simple Machines and Mechanisms (Gr K-3)
Naqshadeyn iyo injineerinta mashaariicdaada STEMspiration! Mashruucyada Sahaminta waxaa ka mid ah barashada STEM iyada oo loo marayo dhisidda iyo qaabeynta naqshad jilicsan, quudiye shimbiraha, aaladda muusikada, baarashuudka, iyo dhismayaasha waaweyn. STEM Explorer waxaad ku abuuri doontaa, ku ogaan doontaa oo ku abuuri doontaa! (Mawduuca diirada: Injineerinka iyo Sayniska)
Sahamiyaha STEM (Gr K-3)
Waa fasal Adeegsiga Nidaamka Naqshadeynta injineernimada, ardaydu waxay awood u yeelan doonaan inay indha indheeyaan oo ay abuuraan sheekooyin diiradda saaraya bilowga sheekada, dhexe-dhexaadka, iyo dhammaadka, horumarinta dabeecadda, iyo xalinta dhibaatooyinka. Ardaydu waxay abuurayaan soona bandhigayaan sheekooyin gaagaaban koox koox ahaan iyagoo adeegsanaya Legos iyo sidoo kale habka / Istaraatiijiyada Joogtada ah ee 'Stop Go Animation'.
Story Starters (Gr K-3)
Fasalada Indianka mareykanka STEAM Imperive Experience waxaa loogu talagalay in lagu xoojiyo aqoonta ardayda ee dhaxalka gaarka ah u ah ab-ogaalka ummadaha Hindida Mareykanka ee laga helay MN. Koorsadani waxay xoojineysaa qaababka asaliga ah ee ogaanshaha iyo waxbarashada waagii hore iyo tan hadda iyadoo sidoo kale la baarayo tabarucaadka Hindida Mareykanka ee sayniska, teknolojiyadda, injineernimada, iyo xisaabta. Mawduucyada waxaa ka mid ah: Luqadda Hindiga Mareykanka iyo ereybixinta, sheekooyinka dhaqanka ku saleysan iyo taariikhaha afka, aqoonta xiddigta asaliga ah, hababka loo hayo tirinta, muujinta dhaqameed iyo kuwa casriga ah ee moodellada farshaxanka, iyo injineernimada iyo nashaadyada kala duwan ee la xiriira xilliga qaboobaha.
Indian Ameekikaanka STEAM Immunive Experience (Gr K-5)
Koorsadaan Ardayda waxay sahaminayaan dhaqdhaqaaqa, iftiinka, dhawaaqa, kuleylka, koritaanka, iyo awood-siinta tijaabooyinka si ay u sahamiyaan fikradaha aasaasiga ah ee tamarta ilayska qoraxda. Ardaydu waxay bartaan sameynta indho indheynta, cabirka, diiwaangelinta natiijooyinka, isbarbar dhiga, kala soocida, sameynta saadaalinta, falanqaynta iyo garaafka natiijooyinka, iyo soo gabagabeynta
Energy Explorations (Gr K-5)
Ku firfircoonow KoolFit-2four7! Kaqeybgal noocyo kala duwan oo ah fasal jimicsi firfircoon, madadaalo iyo fayoqab. Raadi sida sayniska iyo tikniyoolajiyadu ula midoobaan KoolFit-2four7! Dhammaan degmooyinka la soo saaray ama aaladaha shaqsiyadeed ayaa shaqeyn doona. Qalabka heerarka fasalku wuu kala duwan yahay. (Mawduuca diirada: Sayniska, Teknolojiyada, Waxbarashada Jirka, iyo Fayoqabka)
KoolFit-2four7 (Gr K-5)
Nagala soo qaybgal safarkan xiisaha badan ee ardayda Latiin America. Waxaad kaliya aad ubaahantahay waa maskax xiise leh iyo rabitaan gudasho leh "inaad u adeegsato kala duwanaanshaha fasaladeena si aad isbedel sameyno" Khibraddan hal abuurnimo, ee firfircoon waxaad ku dhex ka gali doontaa khibrada ardayda soo galootiga ee Latinaha ee Mareykanka ah. Waxaad dhageysan doontaa sheekooyinkooda, cidda ay yihiin iyo cidda ay doonayaan inay noqdaan. Iyada oo loo marayo farshaxanka, suugaanta, dhaqanka bulshada iyo cayaaraha, waxaad ku baran doontaa wax ku biirinta taariikheed ee Latino waxaadna ka heli doontaa faham qoto dheer qiyamka waaweyn ee ku jira dhaqanka aad la falgaleyso maalin kasta iyo sida qiimahaani u saameynayo isgaarsiinta, xiriirka iyo wada shaqeynta. Marka laga soo tago midabka indhaheena, timaheena iyo maqaarka ... Runtii ma sidaas ayaan ka duwan nahay? Kaalay nagu soo biir oo soo ogow!
Koorsada Laatiinaha Mareykanka ah (Gr K-5)
Baadh fikradaha STEM iyada oo loo marayo buugaagta sawirada iyo kuwa khiyaaliga ah labadaba. Markaa noqo saynisyahano, farsamo yaqaanno, injineero, iyo aqoonyahanno xisaabeed adoo adeegsanaya tijaabooyin gacmo-qabasho xiiso leh iyo nashaadaad ka heshay buugaagta aad aqrisay! (Mawduuca diirada: STEM iyo Akhriska / Farshaxanka Luqadda)
Sheekooyinka STEM (Gr K-5)
Abuur, Dhibaato xallin, Wax ka baro Wasps, Shinida, Xayawaanka Xadiiqadda OO Dhis Xirfadaha Xisaabta! Khibrad gacan-qabasho, la kulan macallimiinta iyo asxaabta! (Mawduuca diirada: Xisaabta iyo Sayniska)
Barashada Xisaabta Ku salaysan Mashruuca (Gr 2-3)
Sahami qiimaha hal-abuurka markaad fikradahaaga ugu waaweyn nolosha u keento adigoo u maraya Fikirka Naqshadeynta! Ganacsatada guuleysta waxay abuuraan sawir gacmeedyo, waxay dhisaan noocyo, astaamo naqshadeeya oo suuq geeya wax soo saarkooda iyagoo ilaalinaya hantidooda aqooneed. Noqo nashqadeeyaha iyo abuuraha ikhtiraacaaga gaarka ah! Waxaad u adeegsan doontaa mala-awaalkaaga Flight Lab intaad ku baareyso duulimaadka diyaaradaha waraaqaha, gliders, gantaallo, heliballs iyo gacanta-copters. Naqshadeynta A Sports Arena waxaad ku ganacsan kartaa kaararka ciyaarta khabiirka, abuuri karaa oo ciyaari karaa cayaarahaaga kubbadda tamarta sare ku shaqeysa, kadib naqshadeeya oo samee dhismaha isboortiga ugu dambeeya! Adiga oo adeegsanaya xirfadahaada xalinta dhibaatooyinka waxaad sidoo kale ogaan doontaa habab aad ku ilaalin karto nidaamka deegaanka ee Dunida. Hawlaha waxaa ka mid ah ku tartamida tartanka zipline, sahaminta ilaalinta tamarta, baabi'inta wasakheynta iyo ka caawinta duurjoogta deegaannada dalka oo idil.
Camp Invention (Gr 3-5)
Fasalkan waxaa lagu baran doonaa luqadda Hmong, taariikhda, iyo dhaqanka. Ardaydu waxay ku lug yeelan doonaan agab laba-qoris qorista mashruucyada 'STEM' iyagoo adeegsanaya fikirka adag iyo xirfadaha xalinta dhibaatooyinka.
Hmong Culture-STEM Course (Gr 3-5)
Weligaa ma fuushay roller coaster? Weligaa ma rabtay inaad naqshadeyso mid kuu gaar ah? Baadh sida loo isticmaalo sayniska iyo naqshadaynta injineernimada si loo dhiso moodal roller coaster. Imtixaan ka samee waxa roller coasters sare ay caan ku yihiin. Wax ka ogow waxa ka dhigaya roller coaster-ka inuu shaqeeyo isla markaana si hal abuur leh u naqshadeeyo raacitaankaaga ugu fiican iyo soojiidashada nasashadaada! Abuur fiidiyoogaaga duubo ficil ahaan! (Mawduuca diirada: Sayniska iyo Injineernimada
Sayniska Roaster Coaster (Gr 3-5)
Baadhitaanka Sayniska Biomedical. Ardaydu waxay sahmin doonaan sayniska DNA iyaga oo adeegsanaya waxqabadyada qaabeynta / jilitaanka iyo tijaabooyinka la xiriira timaha, faraha, nooca dhiigga, astaamaha indhaha, iyo cudur faafa. Fasalkani wuxuu ardayda siin doonaa fursad ay kula shaqeeyaan saynisyahannada dhabta ah taasoo qayb ka ah baaritaanadooda. (Mawduuca diirada: Sayniska iyo Teknolojiyada)
Biomedical (Gr 4-5)
Ardaydu waxay awood u yeelan doonaan inay dhisaan hal-abuurkooda, xallinta dhibaatooyinka, qorshaynta, iyo xirfadaha qiimeynta. Ardaydu waxay dhisaan noocyo shabahaad ah waxayna wax ka beddelaan naqshadaha si ay u hubiyaan inay taageeraan waxqabadka la farsameeyay, bilicsanaanta, iyo ergonomics. Ardaydu waxay sare u qaadi doonaan wada xiriirka, wada shaqeynta, iyo xirfadaha soo bandhigida ee noocyada naqshada.
Design Technology (Gr 4-5)
Waa Koorso ay ku jirto casharo xoogaa xiiso leh oo howlaha Electroworks iyo mashaariic elektaroonig ah. Waxaa ka mid ah tijaabooyinka xarun u ah oo ku saleysan ee korantada ma guurtada ah, batariyada, birlabta, elektromagnetism-ka, iyo wareegyada. Ardaydu waxay abuuri doonaan oo ay baari doonaan noocyo kala duwan oo wareegyada korantada ah, tamarta, iyo elektarooniga ah iyada oo loo marayo gacmo kala duwan oo ku saabsan mashaariicda iyo jilitaanka kombiyuutarka.
ElectroWorks & Electronics (Gr 4-5)
Baro naqshadaha makaanikada, dhismaha, barnaamijyada, iyo xirfadaha wada shaqeynta. Samee noocaaga robot MBot adigoo adeegsanaya walxaha dhismaha, matoorrada, iyo dareemayaasha. Barnaamijka aaladaha kombiyuutarka si ay u dhaqaajiyaan, u falceliyaan, oo ay dhawaaqyo u sameeyaan. Ka faa'iideyso noocyada iyo xirfadaha barnaamijyada si aad u xalliso caqabadaha naqshadeynta. Kooxuhu waxay barnaamijkooda u diyaarin doonaan MBot-ka loo yaqaan 'Mars Challenge' iyo lambar tartan iyadoo la adeegsanayo jilitaanka CoderZ EV3. Fiiro gaar ah: MBot iyo Mars Mat ayaa la siiyay; barnaamijyada softiweerku waa mid ku saleysan websaydhka sidaa darteed ardaydu waxay isticmaali doonaan barnaamijyadooda 'MPS' ee Chromebook / Laptops la soo saaray. (Mawduuca diirada: Injineernimada, Sayniska Kombiyuutarka iyo STEM)
Baadhitaan Robotics-ka (Gr 4-5)
Baadhitaanada Jidadka Dabiiciga ah ee deegaankayaga. Ardaydu waxay sahmin doonaan shabakadaha cuntada, jajabka guumayska, daboolidda iyo jilitaanka, noocyada duullaanka ah, saliidda daadatay, iyo joogtaynta iyada oo loo marayo hawlo gacan-qabasho iyo tijaabooyin ah. Fasalkani wuxuu ardayda siin doonaa fursad ay kula shaqeeyaan saynisyahannada dhabta ah taasoo qayb ka ah baaritaanadooda. (Mawduuca diirada: Sayniska iyo Teknolojiyada)
Nidaamyada Dabiiciga ah (Gr 4-5)
Abuur, Dhibaato xallin, Wax ka baro xayawaanka rabaayadda ah, Xannaaneeyayaasha, Astaamaha Disney / Kartoonada iyo Dhisida Xirfadaha Xisaabta! Khibrad gacan-qabasho, la kulan macallimiinta iyo asxaabta! (Mawduuca diirada: Xisaabta iyo Sayniska)
Barashada Xisaabta Ku salaysan Mashruuca (Gr 4-5)
Naqshadeyn iyo injineerinta mashaariicdaada STEM! Abuurista Mashruucyada waxaa ka mid ah barashada STEM iyada oo loo marayo dhisida iyo dib u qaabeynta kataatoolayaasha, gawaarida buufinta, buundooyinka Da Vinci, ikhtiraacyada, iyo fuulayaasha buuqa. STEM Explorer waxaad ku abuuri doontaa, ku ogaan doontaa oo ku ikhtiraaci doontaa! (Mawduuca diirada: Injineerinka iyo Sayniska)
Abuuraha STEM (Gr 4-5)
HALKAN KU SOO KOOBAN 6-8 KOORSOOYIN, IYADOO 1 AY TAHAY XULASHADAADA UGU HORAYSA:
Injineer isku dhafan iyo qaabeyn ka jawaabeysa awood u lahaanshaha iyo joogtaynta loo baahan yahay qarniga 21aad. Wax kasta oo aad ugu baahan tahay wax ka yar 200 fuudh oo laba jibbaaran: baro aasaaska dhismaha, naqshadeynta, dhismaha, injineernimada korantada iyo tuubooyinka. Nagala soo qaybgal qaadashada caqabadda yar ee naqshadeynta guryaha! (Mawduuca diirada: Sayniska iyo Injineernimada
Naqshad Dhismeedka (Gr 6-8)
Ardaydu waxay awood u yeelan doonaan inay dhisaan hal-abuurkooda, xallinta dhibaatooyinka, qorshaynta, iyo xirfadaha qiimeynta. Ardaydu waxay dhisaan noocyo shabahaada ah waxayna wax ka beddelaan naqshadaha si ay u hubiyaan inay taageeraan waxqabadka la farsameeyay, bilicsanaanta, iyo ergonomics. Ardaydu waxay sare u qaadi doonaan wada xiriirka, wada shaqeynta, iyo xirfadaha soo bandhigida ee noocyada naqshadaha.
Design Technology (Gr 6-8)
Koorsada ElectroWorks & Elektaroonigga -waxaa ku jira casharo madadaalo leh meelaha shaqada laga qabto iyo mashaariicda elektaroonigga ah. Waxaa ka mid ah tijaabooyinka xudunta u ah oo ku saleysan ee korantada ma guurtada ah, baytariyada, birlabta, elektromagnetism-ka, iyo wareegyada. Ardaydu waxay abuuri doonaan oo ay baari doonaan noocyo kala duwan oo wareegyada korantada ah, tamarta, iyo elektarooniga ah iyada oo loo marayo gacmo kala duwan oo ku saabsan mashaariicda iyo jilitaanka kombiyuutarka.
ElectroWorks & Electronics (Gr 6-8)
Sahaminta iyo Codsiga Dhaqdhaqaaqa ee Robotics iyo Sayniska Kombiyuutarka oo leh teknoolojiyad hoggaamineed (MBots) iyo softiweer (makeblock) iyada oo loo marayo naqshadaynta farsamada, dhismaha, barnaamijyada iyo xirfadaha wada shaqaynta. Samee noocaaga robot MBot adigoo adeegsanaya walxaha dhismaha, matoorrada, iyo dareemayaasha. 1) Naqshadeynta, dhisida iyo wax ka bedelida lifaaqyo kaladuwan iyo 2) isticmaal barnaamijyada makeblock si loo xaliyo caqabadaha adag ee sii kordhaya ee Mars Mat-kooda. Adeegsiga kooxaha ardayda ee CoderZ waxay si tartiib tartiib ah u codeeyn doonaan jilitaanka EV3. Fiiro gaar ah: MBot iyo Mars Mat ayaa la siiyay; barnaamijyada softiweerku waa mid ku saleysan websaydhka sidaa darteed ardaydu waxay isticmaali doonaan barnaamijyadooda 'MPS' ee Chromebook / Laptops la soo saaray. (Mawduuca diirada: Injineernimada, Sayniska Kombiyuutarka iyo STEM)
Baadhitaan Robotics-ka (Gr 6-8)
Hal-abuurnimadu aad bay uga badan tahay daqiiqadda eureka! Mashruuca Hindisaha, ardayda waxay ku baran karaan ganacsiga hal-abuurnimada, noocooda illaa soo-saarista alaabada. Iyada oo loo marayo tamar sare, waxqabadyo gacanta ah, barnaamijkeenu wuxuu awood u siinayaa kaqeybgale kasta inuu u beddelo fikradaha ikhtiraac, lana ogaado sida suuq geynta loogu soo bandhigo. Ku dhiirrigeli inaad wadaagto hal-abuurkaaga iyo hal-abuurnimadaada! (Mawduuca diirada: Injineerinka iyo Sayniska)
Mashruuca Hindisaha (Gr 6-8)
KoolFit-2four7 (Gr 6-8)
Horumari xirfadahaaga akhris-qorista iyo muuqaalka ah si aad toos ula qabsaneyso fasalkaan ka qeybgalka howlahiisa, gacanta-looga shaqeeynayo sida sawir qaadista. Codkaaga ha laga maqlo adiga oo ku tabinaya fikradaha sheeko ee asalka ah iyo qorista aragtiyada ardayda ee joornaalka GEMS / GISE / STEM. Ardayda waxay baran doonaan aasaaska Saxaafadda sida wareysiga, qorista, sameynta fikradaha sheekada, tafatirka, iyo daabacaada qoraalka ee joornaalka ardayga GEMS / GISE / STEM. Rajada qorayaasha ayaa raba!
Sawir qaadid & Journalism (Gr 6-8)
Sayniska Roaster Coaster (Gr 6-8)
Koorsadan waxaad ku sahamin doontaa muusikada adoo duubaya, tifaftirka iyo curinta adoo adeegsanaya barnaamijka Soundtrap. Intii ay sahaminta muusigga ka dhex wadeen mashaariicdan kaladuwan ee dhijitaalka ah iyo kuwa elektarooniga ah, ardaydu waxay kaloo wax ka baran doonaan acoustics, xisaabta, elektaroonigga, iyo fiisikiska ka dambeeya hal-abuurnimadooda. (Mawduuca diirada: Muusikada iyo Injineeriyadda)
Sonic Pi Studio (Gr 6-8)
Naqshadeyn iyo injineerinta mashaariicdaada STEM! Mashruucyada Innovator waxaa ka mid ah barashada STEM iyada oo loo marayo dhisida iyo dib u qaabeynta kataatooyinka, trebuchets, kites, iyo gawaarida qoraxda. STEM Explorer waxaad ku abuuri doontaa, ku ogaan doontaa oo ku ikhtiraaci doontaa! (Mawduuca diirada: Injineerinka iyo Sayniska)
Hindisaha STEM (Gr 6-8)
Raadinta awooda tamar ka duwan. Naqshadeynta ardayda iyo dhisida matoor dabayl oo dhalisa koronto. Ku bilow tijaabinta iyo beddelidda nashqadaha daabka. Baro sida ama qaabka, ay u rakiban yihiin, iyo tirada garbaha ay u saameeyaan inta koronto ee ay soo saarto marawaxadaha dabaysha. Immisa koronto ayaad soo saari kartaa?
Wind Turbines & ALT Energy (Gr 6-8)
Maxaad rajaynaysaa inuu ilmahaagu ka faa'iideysto ka dib barnaamijyada dugsiga kadib?
Yoolalka Waalidka / Wakiilka ee Ardaygan
Fadlan dooro wareegga fasalka Isniinta / Arbacada ama Talaadada / Khamiista.
Dooro dhammaan kuwa ku habboon (dhammaan koorsooyinka Maalinta Dheeriga ah waxaa loogu talagalay inay ka baxsan yihiin maalinta iskuulka ee sida caadiga ah loo qorsheeyey).
CITYWIDE KULAMADA Monday and Wednesday 4:30-5:30PM STEM Stories Anna Dahl (K-1)
Monday and Wednesday 3:30 PM-4:30PM American Indian STEAM Immersive Experience Siena Braun (K-2)
Monday and Wednesday 3:30 PM-4:30PM KOOLFIT2four7 Nancy Duwenhoegger (K-2)
Monday and Wednesday 4:30PM-5:30PM Cross-Cultural Connections Latin America Corin Pastrana (K-2)
Tuesday and Thursday 3:30 PM-4:30PM Hmong Culture STEM Course Mee Xiong (K-2)
Tuesday and Thursday 3:30-4:30PM KOOLFIT2four7 Jeff Sanders (K-5)
Monday and Wednesday 3:30-4:30PM STEM Stories Arika Quintinilla (1-2)
Monday and Wednesday 3:30-4:30PM PBL Math Abbie Finger (2-3)
Monday and Wednesday 4:30PM-5:30PM Story Starters Desiree Hyrkas (3-4)
Monday and Wednesday 3:30 PM-4:30PM American Indian STEAM Immersive Experience Anjanette Parisien (3-5)
Monday and Wednesday 3:30-4:30PM Camp Invention Rob Rand (3-5)
Monday and Wednesday 3:30 PM-4:30PM KOOLFIT2four7 Paul Sarver (3-5)
Monday and Wednesday 4:30PM-5:30PM Cross-Cultural Connections Latin America David Translavina (3-5)
Monday and Wednesday 4:30PM-5:30PM Hmong Culture STEM Course Meng Xiong (3-5)
Tuesday and Thursday 3:30=4:30PM Camp Invention Tammy Cowan (3-5)
Tuesdays and Thursday 3:30-4:30PM STEM Creators Rob Rand (3-5)
Monday and Tuesday 3:30-4:30PM Natural Systems / Biomedical Frank Goodrich (3-5)
Monday and Wednesday 4:30-5:30PM Wind Turbines David Nolde (4-5)
Monday and Wednesday 4:30PM-5:30PM STEM Stories Deb Scherber (4-5)
Tuesday and Thursday 3:30-4:30PM PBL Math Abbie Finger (4-5)
Tuesday and Thursday 3:30-4:30PM Natural Systems/Biomedical Robyn Connelly (4-5)
Monday and Wednesday 4:30PM-5:30PM STEM Innovator Kenneth Vreeland (6-8)
Tuesday and Thursday 4:30PM-5:30PM STEM Innovator Robyn Connelly (6-8)
Qalab Waxqabadka Akadamiyada STEM ayaa loo siin doonaa ardayda inay u adeegsadaan barashada tooska ah ee online-ka (fasalka tooska ah ee online-ka, ee aan is-wadin) macalinkooda. Qalabka STEM Academy ayaa soo qaadaya oo dhigaya macluumaadka soo socda dhawaan. Cunug kasta oo ka diiwaangashan wuxuu u baahan doonaa qalab ka dib barnaamijyada dugsiga inta lagu guda jiro nool, waqtiga macallinka (synchronous).
SCHOOL KULAMADA ANDERSON Wednesday and Thursday 2:30-3:30PM Natural Systems Heather Mariskanish (4-5)
ANDERSON Monday and Wednesday 3:30-4:30PM Rollercoaster Science Benjamin Kimmel (3-5)
BARTON Monday and Wednesday 3:30-4:30PM KoolFit-2Four7 Ashley Firouzi (3-5)
CITYVIEW Tuesday and Thursday 3:30-4:30PM PBL Math Kris Romsdal (K-1)
FIELD Tuesday and Thursday 3:00-5:00PM STEM Stories Stacy Risinger (5)
FIELD Tuesday and Thursday 2;30-3:30PM Photography Emily Ringold (6-8)
FOLWELL Monday and Wednesday 3:30-4:30 PBL Math Erika Werner (2-3)
FRANKLIN Monday and Tuesday 4:00-5:00 PM STEM Innovator John Hayes (6-8)
HIA Monday and Wednesday 3:30-4:30PM Natural Systems Julie Winkles (3-4)
HIAWATHA Tuesday and Thursday 3:30-4:30PM STEM Stories Gabrielle Bliss (K-1)
JEFFERSON Monday and Wednesday 3:30-4:30PM Camp Invention SPANISH Victor Martinez (2-3)
JEFFERSON Tuesday and Thursday 3:30-4:30PM Camp Invention ENGLISH Victor Martinez (2-3)
LAKE HARRIET LOWER Tuesday and Thursday 3:30-4:30PM PBL Math Amy Hollemback (K-1)
LAKE HARRIET LOWER Tuesday and Thursday 3:30-4:30PM Explore Robotics L. Michael Brown (3-4)
LAKE HARRIET UPPER Tuesday and Thursday 8:00-9:00AM Explore Robotics Jeff Tousignant (6-8)
LORING Monday and Wednesday 4:30-5:30PM KoolFit-2Four7 Nancy Duwenhoegger (K-2)
LUCY LANEY Tuesday and Thursday 2:45-3:45PM STEM Explorers Chris Hochstatter (1-2)
NELLIE STONE JOHNSON Monday and Wednesday 3:00-4:00PM KoolFit-2Four7 Jennifer Stecker (3-4)
NORTHEAST MIDDLE SCHOOL Tuesday and Thursday 4:30-5:30PM Amazing Architecture Teri Sue Hitchcock (6-8)
NORTHROP Tuesday and Thursday 4:00-5:00PM Camp Invention Katrina Hayek Munsisoumang (4-5)
OLSON Monday and Wednesday 4:30-5:30PM STEM Innovators Rondi Lund (6-8)
SANFORD Tuesday and Thursday 4:30-5:30PM KoolFit-2Four7 Julie Anderson (6-8)
SEWARD Monday and Wednesday 2:30-3:30PM Biomedical Lisa Herr (4-5)
SEWARD Monday and Wednesday 2:30-3:30PM Rollercoaster Science Doug Brown (6-7)
SEWARD Tuesday and Thursday 3:30-4:30PM Sonic Pi Zac Kamm (6-8)
SHERIDAN Tuesday and Thursday 3:30-4:30PM Simple Machines Maria Pena (2-3)
SHERIDAN Wednesday and Thursday 2:30-3:30PM PBL Math Sara Moen (2-3)
SULLIVAN Wednesday and Thursday 3:30-4:30PM PBL Math Whitney Newbauer (3-5)
WEBSTER Monday and Wednesday 3:30-4:30PM STEM Stories Julia Roble (3-4)
ARDAYDU WADA SHAQEEYAYAAN MASHRUUCA IYO DHIBAATADA SOO SAARSAN KOORSOOYINKA. IMAANSHAHA JOOGTADA AH EE BARNAAMIJKA OO DHAMMAAN WAA MUHIIM. WAXAAN KU TALO GALNAY IN HADII LAGU QAADO GEMS / GISE / STEM BARNAAMIJKA ISKUULKA KA DIB IN UU ARDAYGU QAADAN DOONO DHAMMAAN KALSANKA, LA SHAQAYN DOONO KOOXDOODA, LA SHAQAYNAYO OO LAGU QABANAYO DHAMMAAN KA QEYB QAATAYAASHA IYO DADKA WAAWEYN EE BARNAAMIJKA OO AAD NOQOTO AMBAS DHACDOOYINKA DADWEYNAHA.
FILASHADA KA QEYBGALKA IYO BALAN QAADASHADA HAA
ARDAYGAYGU WUXUU IGA HEYSTAA TAAGEERO BUUXDA IYO OGGLAASHAHA INUU KAQAYBQAATO WAXBARASHADA XAGGAAGA SANAD DUGSIYEEDKA HAA
SAXIIXA ELEKTROONIGA AH ARDAYGA
Yoolalka Waalidka / Wakiilka Saxiixa